अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उम्मेदवारका लागि कुन नेता कहाँबाट सिफारिस ? – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
असोज २२, काठमाण्डौ । आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र केन्द्रिय प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारहरु सिफारिस हुने क्रम जारी छ । विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा नाम चलेका नेताहरु विभिन्न स्थानका लागि उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीका आधारमा प्रमुख नेताहरुको उम्मेदवारी हुने सम्भावनाहरु यँहा प्रस्तुत गरिएका छ ।
डडेल्धुरा कांग्रेसका दुई समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेका छन् । देउवा ०४८ देखि नै डडेल्धुराबाट निर्वा्चित हुँदै आएका छन् । उनी पहिलो संविधानसभामा कञ्चनपुर र दोस्रो संविधानसभामा कैलालीबाट निर्वाचित भएका थिए ।
काठमाडौं–५ बाट लगातार दुईपटक निर्वा्चित आचार्य यसपटक सिफारिसमा परेका छैनन् । उपचारका क्रममा अमेरिका रहेका आचार्यसँग परामर्श गरेपछि क्षेत्र र जिल्लाले उनको नाम सिफारिस नगरेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली गृहजिल्ला झापा–५ र सिरहा–१ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट सिफारिस भएका छन् । मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल सिरहाबाट चुनाव लड्न उनलाई पार्टी्भित्रै दबाब छ । झापाबाट चारपटक निर्वा्चित ओली पहिलो संविधानसभामा पराजित भएका थिए ।
एमाले नेता माधव नेपाल काठमाडौं–२, रौतहट १ र ४ बाट सिफारिस भएका छन् । काठमाडौं–२ बाट पहिलो संविधानसभामा पराजित र दोस्रो संविधानसभामा निर्वा्चित नेपाल यसपटक सोही क्षेत्रबाट लड्ने तयारीमा छन् । रौतहटमा स्थानीय तहमा एमाले शून्य भएको छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल इलाम–१ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । खनाल पाँचौँपटक उम्मेदवार सिफारिस भएका हुन् । ०५६ बाहेक उनी चारपटक सोही क्षेत्रबाट निर्वा्चित भएका छन् ।
उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल अछाम १ र कैलाली २ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । उनी ०५१ र ०७० को निर्वाचनमा अछामबाट निर्वा्चित भएका थिए । ०६४ मा भने उनी समानुपातिकबाट निर्वा्चित थिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड चितवन–३ बाट सिफारिस भएका छन् । प्रचण्डको नामावली भतरपुर महानगर–४ मा छ । पहिलो संविधानसभामा रोल्पा २ र काठमाडौं १० बाट निर्वा्चित उनी दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं १० बाट पराजित र सिरहा ५ बाट निर्वा्चित भएका थिए ।
नेता नाराणकाजी श्रेष्ठ गोरखा–२ बाट सिफारिसमा परेका छन् । तर, एउटै गठबन्धन बनाएका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि यही क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्दै छन् । माओवादी नेताका रूपमा दुईपटक निर्वा्चित भट्टराई यसपालि सूर्य चिह्न लिएर उठ्दै छन् ।
रामबहादुर थापा ‘बादल’ चितवन–२ बाट सिफारिसमा परेका छन् । उनको घर भने चितनव–१ मा पर्छ । पहिलो संविधानसभामा चितवन–२ निर्वा्चित बादल दोस्रो संविधानसभा बहिष्कारको पक्षमा सक्रिय थिए ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा दाङ–२ बाट सिफारिस भएका छन् । उनी पहिलो संविधानसभामा दाङ–३ बाट र दोस्रो संविधानसभामा रोल्पा २ बाट निर्वा्चित भएका थिए ।
माओवादी नेता वर्षामान पुन रोल्पाबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । रोल्पामा यसपालि एउटा मात्र क्षेत्र छ । पहिलो संविधानमा ललितपुर–१ बाट निर्वा्चित उनी दोस्रोपटक मोरङ–९ बाट पराजित भएका थिए ।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पश्चिम रुकुमबाट सिफारिस भएका छन् । अहिले रुकुम फुटेर पूर्वी र पश्चिम भएको छ । शर्मा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा रुकुम क्षेत्र २ बाट निर्वा्चित भएका थिए ।
माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट सिफारिस भएका छन् । उनी पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अर्घाखाँची–१ बाट निर्वा्चित भएका थिए । अर्घाखाँची दुईबाट घटेर एउटा क्षेत्रमा सीमित भएको छ ।
झापाबाट कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र विश्वप्रकाश शर्मा सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । सिटौला ३ र शर्मा १ बाट सिफारिस भएका हुन् । सिटौला ०७० को संविधानसभामा ३ बाटै निर्वा्चित भएका थिए ।
कांग्रेस युवा नेता गगन थापा काठमाडौं ४ बाट सिफारिस भएका छन् । थापा गत संविधानसभा निर्वाचनमा पनि ४ बाटै निर्वा्चित भएका थिए ।
सचिव प्रदीप ज्ञवाली गुल्मी–१ बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । सचिव गोकर्ण विष्ट गुल्मी–२ बाट सिफारिस भएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वा्चित भएका थिए
स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे चितवन–१ बाट सिफारिस भएका छन् । यसअघि सोही क्षेत्रबाट निर्वा्चित पाण्डे राष्ट्रियसभाको सांसद पनि निर्वाचित भइसकेका छन् ।
नेता लालबाबु पाण्डित मोरङ–६ बाट उम्मेदर सिफारिस भएका छन् । उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वा्चित सांसद हुन् ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्पा भुसाल ललितपुर ३ बाट उठ्ने भएकी छन् । उनको जिल्लाले केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेको छ । भुसालको पुरानो घर अर्घाखाँची भए पनि ललितपुरबाट निर्वाचन लड्दै आएकी छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी ललितपुर ३ बाटै निर्वा्चित भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा रहेकाले निर्वाचन लड्न पाइनन् ।